कोरिया जाने कामदारले डलर साटन थप सहज बनाईदै,यसरी साटनुस ! – Kantipur Press
कोरिया जाने कामदारले डलर साटन थप सहज बनाईदै,यसरी साटनुस !
रोजगारीको लागि दक्षिण कोरिया जाने नेपालीले अब एक हजार ५ सय रुपैयाँसम्म थप सटही सुविधा पाउने भएका छन्। हालसम्म भने राहदानीको आधारमा यसरी रोजागारीमा जानेले २ सय डलरसम्म सटही सुविधा पाउने गरेका छन्।
कोभीड १९ को कारण क्वारेन्टिन खर्चबापत यस्तो सटही सुविधा दिन लागिएको हो। यद्यपी यसको लागि भने वैदेशीक रोजगार विभागको सिफारिश पत्र समेत पेश गर्नुपर्ने हुन्छ भने रोजगारीमा जानेले विद्युतीय कार्डको माध्यमबाट यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।
पुरा सुचना यहाँ हेर्नुहोस।
कोरोना भिषा थप १ बर्ष थपिने
नेकपा माओबादी निकट प्रवास संगठन जनप्रगतिशिल मन्च कोरियाले अधिबेशन गर्ने